Dowladda Faderalka oo qaaday talaabo aysan horay uqaadin dowladihii hore “Fasaxa Sabtiga muxuu daaran yahay?”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDowladda Faderalka oo qaaday talaabo aysan horay uqaadin dowladihii hore “Fasaxa Sabtiga muxuu daaran yahay?”.
Dowladda Faderalka oo qaaday talaabo aysan horay uqaadin dowladihii hore “Fasaxa Sabtiga muxuu daaran yahay?”.
November 8, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 0
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in la fasaxay dhamaan shaqaalaha Dowladda maalinta sabtiga ah soo socota.
Ujeedada Fasaxa Shaqaalaha Dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay xuska dhalashada Nabiga NNKH oo ku beegan 12ka Bisha Mowliid.
War-saxaafadeed ka so baxay Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu fasaxay shaqaalaha dowladda.
DEG DEG: Siciid Deni & Aaranjaan yey u wataan Gudoomiye baarlamaan & Warsangali oo careysan
SAWIRO:- Reer Mudug oo maanta dhigay Banaanbax ay fariin ugu dirayaan Farmaajo iyo Deni.